Mampiato ny vagao karbady amin'ny vy amin'ny induction-Brazing Heater
Famolahana karbady mitambolimbolina
Tanjona: Atao amin'ny tavoahangin-jiro ny valan-koditra
Fitaovana: hazo karbida 1/8 ″ hatramin'ny 1 ″ savaivony (habe samihafa) Tube vy 3/8 ″ hatramin'ny 1 ¼ ”OD Silver solder braze
Toetrandro: mampiseho ny loko
Temperatio: 1400 ° F para seguinte 60 Frequency300 kHz
Fitaovana: DW-UHF-6KW-III, 150-400 kHz rafitra fanamafisam-peo fiokoana matanjaka izay misy seranan-tseranana hafanana izay misy kapila roa 0.66 μF (total 1.32 μF)
Fomba fanodinana: ampiharina amin'ny solder volafotsy, izay ihaonan'ny vatan'ny karbida sy ny fantsom-by. Ny fahazavana eo anelanelan'ny faritra roa dia manodidina ny .0005 ″. Ny sombin-doha kely iray dia apetraka amin'ilay ampahany ary avy eo hafanaina. Mila 60 segondra eo ho eo ny fivezivezena ny fihenan-tsofina amin'ny fifindra-monina hafanana sy fikorianan'ny solder. Na dia azo hafanaina haingana kokoa aza ny ampahany, 60 segondra ny vokatra azo.
Vokatra / tombony: Ny fanamorana ny induction dia manome ny hafanana mazava. Ny hafanana araka ny fepetra ilaina dia ilaina amin'ny fiarovan-doha hamandrika eny amin'ny faritra mba hiantohana fiaraha-miasa tsara.
Sokajy Technologies Tags carbide brazing, Hazo kofehy felana, Famolahana karbady mitambolimbolina, Fiatoana, induction carbide carbide, RF Post Fikarohana
Fiarovan-tombo-tsoavaly amin'ny fanondroana
Famolavolana fitaovana famolavolana amin'ny induction